‘७० करोड र मान्छे सँगै जोखिएछ’ : डा रावल « Ok Janata Newsportal
‘७० करोड र मान्छे सँगै जोखिएछ’ : डा रावल
काठमाडौं । नेकपा (दाहाल–नेपाल पक्ष)का स्थायी समिति सदस्य डा. भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अराजनीतिक प्राणी रहेको आरोप लगाएका छन् । दुई वामघटक एक हुँदा राजनीतिक प्रतिवेदनका आधारमा सहमति जुटाउनुपर्ने भएपनि प्रधानमन्त्री ओली त्यसको विरुद्ध गएको उनको आरोप छ ।
डोटी काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको आयोजनामा नेकपा केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा भएको भेलामा बोल्दै डा. रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले एकताको बेला गरेका बाचा बिर्सिएको बताए ।
एक प्रशंगमा बोल्दै रावलले प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद्मा तस्करको जालो रहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेका वनमन्त्री नियुक्त भएपछि धेरै तस्कर डराएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्, तर म भन्छु तस्कर डराएका होइनन् शुक्लाफाँटाका रुख डराएका हुन् । बढी र छतिवनका रुख डराएका छन् ।’
रावलले भने, ‘राजनीतिक संस्कार नबोकेको व्यक्तिलाई धेरै संस्कार सिकाउन खोजियो तर मानेन । अहिले ओलीले सिंगो सुदूरपश्चिमलाई विखण्डन गर्न मन्त्री उपहार दिएका हुन् ।’
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई इंगित गर्दै रावलले भने, ‘ओलीले बास्कोटालाई पार्टीका सबै नेता एकातिर बास्कोटा एकातिर भएपछि उनी बलिया छन् भन्दै हिँडे, तर मैले बुझेको थिएन पछि विचार मनन गर्दा त त्यो ७० करोड जोखिएको रहेछ ।’
यता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) डोटी–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको संयोजकमा पूर्ण खड्का चयन भएका छन ।
दाहाल–नेपाल समहुको पेरिसडाँडामा आयोजना गरिएको भेलामा संयोजकमा खड्का र सह–संयोजकमा खडक अग्रवाल चयन भएको नेकपाका नेता सागर भट्टले जानकारी दिए ।
नेकपा नेता सागर भट्टको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको भेलाबाट ९ सदस्यीय तर्दथ समिति गठन गरिएको हो ।
नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्ज डा. रावल प्रमुख अतिथि र प्रदेश कमिटि सदस्य हर्कबहादुर सिंहको विशिष्ट आतिथ्यतामा समिति गठन गरिएको हो ।
काम तथा पढाइको शिलशिलामा काठमाडौंमा रहेका नेकपा सर्मथक व्यक्तिहरुको संगठनको रुपमा लामो समय देखि डोटी–काठमाडौं सम्पर्क सञ्च क्रियाशिल रहेको छ ।